Archive du 20181129
Ravalomanana sy Rajoelina Hangotraka ny fihodinana faharoa
Araka ny efa nanampoizana azy, mizotra mankany amin’ny fihodinana faharoa ny fifidianana filoha, araka ny voka-pifidianana ofisialy navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC omaly.
Naneho ny heviny momba ny toe-draharaham-pirenena ny mpandinika politika Dr Jules Andriamaholison, mpikambana ao anatin’ny K25.
Jean Eric Rakotoarisoa “Nampitandrina ireo miketrika adim-poko”
Nahitsy sy nazava tsara ny kabarin’ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC ) Jean Eric Rakotoarisoa omaly taorian’ny fanononana ny voka-pifidianana ofisialy teny Ambohidahy.
Raharaha Mbola Rajaonah Nosokafana ilay “Coffre” nogiazana
Omaly alarobia 28 novambra no nosokafana teo anoloan’ny solontenan’ny BIANCO sy ny tompon-trano, Mbola Rajaonah ilay « coffre » izay nohidin’ny mpanao fanadihadiana nandritra ny fisavana ny tranon’ity mpandraharaha ity teny Ambohimahitsy, herinandro lasa izay.
Faravohitra Anosiala Nahitana fatin-dehilahy efa tsy nisy lohany intsony
Nahitana fatin-dehilahy iray efa tsy nisy lohany intsony ny alatsinainy 26 novambra teo tao amin’ny fokontany Faravohitra, kaominina Anosiala.
LOZA TENY AMIN’NY RN7
Iray no maty tsy tra-drano ary 52 naratra ka ny fito amin’ireo dia mbola miady amin’ny fahafatesana.
Teknisianina mpanao solon-tongotra Betsaka ireo lasa manao mpitsabo mpanampy tsy fidiny
Vao 105 monja hatreto ny isan’ireo teknisianina mpanao solon-tongotra eto amintsika, miasa manerana ny faritra 22.
Fanaovana foara etsy sy eroa Tokony ho tosika ho an’ny toekarena
Mila mihazakazaka mafy amin’ny fandraharahana ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara raha te hahita vokatra mahatsara ny toekarena.